တွေးမိတွေးရာ...ရေးမိရေးရာ: လမ်း၏ ဘေး
Posted by မေဓာဝီ at 3:00 PM
ငလျင်အကြီးအကျယ်လှုပ်ချိန်မှာ ကိုယ်ယုံကြည်အားထား ရပ်တည်နေရတဲ့ မဟာပထ၀ီမြေကြီးကိုမှ အားမကိုးရတော့ဘူး ဆိုတဲ့အသိနဲ့ အရမ်းကို တုန်လှုပ်ချောက်ချားစရသတဲ့...
အင်း.. နောက်ထပ် ရွေးစရာလမ်းလည်း မရှိတော့တဲ့အခါ...
1/13/2010 4:15 PM
အတိတ် ကံကြောင့်လို့ သာ သတ်မှတ်လိုက်ပါတော့
black ice ထက် ပိုဆိုးတာ တစ်ခု ရှိသေးတယ်၊ ခေါင်မိုးစောင်းတွေမှာ နှင်းအဖြစ်ကနေ ရေခဲဖြစ်သွားပြီး ကြွေကျတဲ့ ရေခဲဆူးတွေ၊ အဲဒါပိုပြီး အန္တရာယ် များတယ်လို့ ကျနော်တော့ ထင်တယ်၊ ဒီလိုပဲ စိတ်မညစ်ပါနဲ့။
အနားယူနော် ။ တရားလေးမှတ် ...း)
လက်တွဲဖော်လေး ကောင်းနိုးရာရာလေး ရှာပေးမယ်နော်။
ကိုယ်ချင်းစာတယ်..black ice မှာ လွန်းစံဝတို့ ဂျွမ်းပြန်ကျပေါင်းများပြီ
1/14/2010 1:18 AM
မြန်မာပြည်မှာတော့ black ice မရှိလို့တော်သေးတာပေါ့...ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် သဘာဝဘေး
1/14/2010 9:29 AM
အင်္ဂလန်မှာ နှင်းတွေ အရမ်းကျနေတဲ့ သတင်းကို တွေ့မိတယ်။ ဒါပေမယ့် အချိန်တန်ရင်တော့ နှင်းတွေ ပျောက်ပြီး လမ်းကလေးက လျှောက်ချင်စရာ ကောင်းလာဦးမှာပါ။
ချော်မလဲအောင် လမ်းမပေါ်မှာ လေးဘက်ထောက်ပြီး သွားနေကြသူတွေကို မှတ်တမ်းတင်ထားတာကို တွေ့ရတယ်။
ပန်ပန်ရေ ... နောက်ထပ်ရွေးစရာ လမ်းမရှိတော့ ငုတ်တုတ်ထိုင်ပြီး ငိုနေမိတာ။ :(
ရွက်လွှင့်ခြင်း ... ဟုတ်မယ် .. အတိတ်ကံကြောင့်၊ မမြင်ရတဲ့ အတိတ်က ဆိုးတဲ့ကံတွေက တကယ်ပဲ ကြောက်ဖို့ ကောင်းပါတယ်။
ညီမရေ ... ဆေးလိမ်း၊ ဆေးသောက်ပြီး တနေ့လုံး နားလိုက်တယ်။
ဟုတ်ပ ကိုအောင် .. ရေခဲဆူးတွေက ပိုအန္တရာယ်များတယ်။ ကျမတို့ဘက်ပိုင်းတော့ သိပ်မတွေ့ရဘူး။ တော်သေးတယ်။
ဒေါ်လေးဟန ... မနေ့ကတရက်တော့ အနားယူပါတယ်။ တရားမှတ်ဖို့လဲ ကြိုးစားပါတယ်။ လက်တွဲစရာ မရှိသူတချို့ကတော့ ရေခဲစကိတ်စီးတဲ့ တုတ်တွေနဲ့ ထောက်ပြီးသွားကြတာပဲ။ မမေလဲ အဲလောက်ဆို ရပါပြီ။
ဘဘကျောက် ... ဘကျောက်က ဂျွမ်းပြန်ကျတာ။ ကျမက ပက်လက်လန်လဲတာ။
ဟုတ်တယ် ကိုပေါက်စ .. သဘာဝဘေးက ဒုက္ခပေးတာချည်းပါပဲ။ အနားကလူတွေက သူတို့တောင် အနိုင်နိုင် လျှောက်နေရမို့ လက်မကမ်းတာလို့ဘဲ ဖြေတွေးလိုက်ပါတယ်။
ကိုပေါရေ ... အဲဒီလင့်ခ်မှာပါတဲ့ West Yorkshire ဆိုတာ ကျမအခုနေတဲ့ ဒေသပါပဲ။ လေးဘက်ထောက်ရတာ ကျမတယောက်ထဲ မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်။ :) မနေ့က အဆိုးဆုံး အခြေအနေပေါ့။ တော်တော်များများ ချော်လဲကြတယ်။ ဒီနေ့တော့ မနေ့ကထက် စာရင် တော်သေးတယ် ဆိုရမယ်။
1/14/2010 3:17 PM
သေချာသည် မေဓါဝီ ကိုယ့်ညီမ
လေးဘက်ထောက်ကာ ကွ တ စွာနဲ့ 
ပက်လက်မလှန် ဂျွမ်းမပြန်အောင် ၊
အစွမ်းတွေပြ လမ်းမပေါ်မှာ ၊
အားကိုးရှာမရ ဒီဒုက္ခကို ၊
ကိုယ်ချင်းရယ်စာ ညှာတာမိ၏ ။
ပိုဇိမ်ကျမယ် ထင်ပါရ ။
( ခင်မင်စွာ နောက်ပြောင်ခြင်းပါ ..
စိတ်မဆိုး စေချင်.... )
1/16/2010 5:28 AM
ဘိုင်းကနဲ ပစ်လဲကျသွားပုံများ မျက်စိရှေ့မှာ တကယ် ဖြစ်သွားသလားအောက်မေ့ရတယ်...
သွားတာလာတာ ဆင် ခြင် ဘာ...
အားကိုးရာမှ ဘေးဖြစ်သတဲ့လားညီမရေ… အားငယ်လက်စက ပိုအားငယ်မိပြန်တယ်…
မေရေ… အခုဘယ်လိုနေသေးလဲညီမ… ဒဏ်ဖြစ်သွားရင် ရာသီဥတုအေးတော့ ပိုခံရခက်လိမ့်မယ်… လိမ်းဆေးလေးလိမ်းပြီး ဖြစ်တဲ့နေရာလေးကို တခုခုနဲ့ ပတ်ထား ပြီးတော့ရေနွေးအိတ်လေးကပ်ပေးလေ… အမေမောင်လေးကတော့ ဒီအချိန်ရောက်မှာကြောက်တယ်လို့အမြဲငြီးတယ်… သူ့ သူငယ်ချင်းဆီရေးတဲ့စာထဲမှာ ရုပ်ရှင်ထဲမှာတော့ လက်အိတ်ကလေးစွတ်၊ လောင်းကုတ်ထဲထည့်၊ ပါးစပ်ထဲကအခိုးလေးတွေထွက် မိုက်လိုက်တာလို့ ထင်ရပေမယ့်.. တကယ်ရင်ဆိုင်ရတော့ ခံစားလိုက်ရတာ နှင်းတွေတောင်မမြင်ချင်တော့ဘူးဆိုပဲ…
1/16/2010 4:18 PM
ရေခဲအတွက် ဆူးပါတဲ့ ဘိနပ်ဝယ်ထားပါလား။ ကိုယ့်ကိုကိုယ်ပဲ အားကိုးရင်တော့ နဲနဲခံသာမယ်ထင်ပါရဲ့။
1/17/2010 2:09 AM
မ လည်း နစ်စဉ်လိုလို ဖြစ်နေကျမို့ပါ.
အဲဒီလို ရေခဲမိုး တွေရွာပြီဆိုရင်အပြင်ထွက်ရမှာ အရမ်းေုကာက်ပဲ...
မေကခုမှတခါပဲ ရှိသေးတာဆိုတော့ မ လောက်မဆိုးသေးဘူးလို့ပဲစိတ်ဖြေလိုက်နော်
1/20/2010 2:59 AM
Well...if you don't need snow shoes often, here is my idea of DIY snow shoes. Cut open the can, and make holes with nail or sharp object. It'll become spikey on one side. You attach that to your shoes with rubberband. Wah..la!
အားကိုးရာမှ ဘေးဖြစ်သည်...၊ ၇ လုံးထဲနဲ့ ဖြစ်ရပ်ပေါင်း ၇၀ ကျော်မက ခြုံငုံမိတယ်နော်...၊ ကျစ်လစ်လွန်းတဲ့ စကားစုလေးပါပဲ..၊
ကားတာယာမှာ ချိန်းမတပ်မိဘဲ black ice ပေါ်မှာ တခါတုန်းက မောင်းဖူးတယ်၊ ကူကယ်ရာမဲ့ ဆိုတာ အဲဒီမှာ ၁၀၀% နားလည်သွားတာ..၊း) ဘရိတ်လည်း မဖမ်းရဲဘူး၊ ကဲ..တိုက်ချင်ရာသာ တိုက်လိုက်ပါတော့ ဆိုပြီး ဒီအတိုင်းသာ လွှတ်ထားလိုက်ရတော့တယ်ဗျာ၊ :)
3/04/2011 11:16 PM